Yemen: ISIS oo weerar Bambaano ku qaaday Madaxtoooyada Cadan - Wargane News
Home Somali News Yemen: ISIS oo weerar Bambaano ku qaaday Madaxtoooyada Cadan
Yemen: ISIS oo weerar Bambaano ku qaaday Madaxtoooyada Cadan
Qarax bambaano oo Khamiistii shalay ka dhacay nawaaxiga xarunta Madaxtooyada ee magaalada Cadan ayaa waxaa sheegtay inay ka danbeeyeen kooxda ISIS.
Weerarkan ayey ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, waxaana la sheegay inuu burbur xoogleh uu soo gaaray guryo ku yaalay nawaaxiga xarunta Madaxtooyada Cadan oo uu xiligaasi ku sugnaa Madaxweyne Cabdulrabi Mansuur Hadi iyo waliba Raysalwasaaraha Yemen Khalid Bahah. Mas’uuliyiintan ayaa ka bad baaday weerarkan.
Gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu qarxiyey meel 1km u jirta Madaxtooyada oo ay bar kontarool u tiilay ciidamada illaalada Madaxtooyada.
Kooxda Daacish ee weerarkan sheegatay ayaa barta Twitterka ku faafiyey qoraal ay kusheeganayaan abaabulka iyo fulinta weerarkan, waxayna sheegeen in weerarkan uu fuliyey nin ay ku magacaabeen Abu Hanifa al-Hollandi, macada in ninkan uu ka yimid dalka Holland sida ka muuqata magaca ay kooxdaasi u yiqiineen ninkan, walow aan weli la shaacin magaca rasmiga ah ee qofkan is qarxiyey.
Muuqaalka Twitterka lagu shaaciyey ayaa waxaa sidoo kale kamid ahaa sawiro muujinaya ninka weerarka geystay oo gaarigiisa doonaya inuu ku dhufto goobta ay ku sugnaayeen ciidamada amaanka.
Madaxweynaha Yemen Cabdulrabi Mansuur Hadi ayaa dhamaadkii sanadkii lasoo dhaafay dib ugu soo noqday dalka Yemen, kadib muddo dheer oo uu ku noolaa dalka Sucuudiga, waxaana xiligan xarun u ah Madaxtooyada magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen.
War Deg Deg Ah: Siyaasi Cismaan Hindi oo ku Geeriyooday Magaalada London
SomalilandDaawo Qaabkii Loo Qaabiley Weftigii Culusa Ee Ka Socday Dalka Mareykanka
Somaliland: Wasiir Ku xigeenka Khaarajiga Somaliland Oo Shir Kaga Qeyb-galay Holland
Muqdisho iyo guud ahaan gobollada Soomaaliya oo maanta laga Ciidayo
Somalia: Kenya oo Qaramada Midoobay u gudbisay cadeymaha muranka dhinaca badda ee Somalia.